သနပ်ခါးမေ: ကျွန်မနဲ့ ခရစ်စမတ်စ်များ
Vista December 19, 2011 at 6:50 PM
Merry Christmas Myat kyi Xo Xo
Candy December 19, 2011 at 7:35 PM
မြတ်ကြည် အမှတ်တရလေးက ကန်ဒီနဲ့ တော်တော်ဆင်တယ်..
Merry Christmas နော်... :D
Junemoe December 19, 2011 at 8:16 PM
Merry Christmas & Happy New Year ပါ အမရေ...
မဒမ်ကိုး December 19, 2011 at 8:41 PM
ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေ မြတ်ကြည်ရေ
(ဘီဘီခရင်ဝယ်လိမ်းနေတယ်နော် လှမလှတော့မသိဘူး ဟိဟိ )
rose December 19, 2011 at 11:16 PM
You and your mom photo is very beautiful. Thanks for writing it, sis. I enjoy reading and it makes me smile :))
မြသွေးနီ December 20, 2011 at 1:44 AM
ဘေဘီ December 20, 2011 at 2:41 AM
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ္စမတ်လေးဖြစ်ပါစေ မြတ်ကြည်လေး
အဖွားနဲ့ မြေးနှစ်ယောက်လုံးချော၏း)
အိမ်မက်စေရာ December 20, 2011 at 7:13 AM
အိမ်မက်အတွက်လဲ ခရစ်စမတ်က ခြောက်သွေ့လွန်းနေတယ်..
Myat Kyi La Thein December 20, 2011 at 5:22 PM
ကျေးကျေးမဗျစ်၊ same to you :)
ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူး candy၊ အမျိုးတွေကတော့ ခရစ်ယာန်တွေ။ Merry Christmas to you too.
ဘဝတူသွားပြီ၊ ဂျွန်မိုးရေ :')
အစ်မဒိုးကန် ဘီဘီခရင်နဲ့ ခရစ်စမတ်စ်မှာ အလှတွေပိုနိုင်ပါစေ
Merry Christmas မမ Iora.
Thanks for appreciation Ama Rose. Btw, the photo was taken with my Grandma :)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရစ်စမတ်စ်ပါ အစ်မ မြသွေးနီ။
အစ်မဘေဘီရေ၊ မျိုးရိုးလိုက်သွားတာနဲ့တူပါတယ် ဟီဟိ
အားမငယ်ပါနဲ့ အစ်မ အိပ်မက်၊ ဒီလိုပါပဲ၊ ဘဝဆိုတာ။
Like granny like cutie Myat Kyi:P
Both of your beautiful.
အားမငယ်နဲ့နော်။ Merry X'mas!
မြတ်ကြည် December 23, 2011 at 2:16 PM
Thank you so much Ma Gyi and Ma Camomilla :)